Volume Assembly PCB - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
SOO SAARKA PCB
Muunadaha Golaha PCB
Golaha PCB ee Turnkey
Golaha PCB Deg Deg
Golaha nooc PCB
Golaha PCB mugga
Awoodda PCBA & Adeegyada Kale
Awood ururinta PCB
Golaha Guddiga Wareegga
Soosaaraha Golaha PCB
Shirkadaha Golaha Elektiroonigga ah
Golaha SMT PCB
Daabacaadda PCB Iyo Golaha
Golaha Gudiga Daabacan
PCB Warshadaha Iyo Golaha
Talooyin & Xeelado
PCBFuture wuxuu ku takhasusay adeegyada isku-dhafka PCB ee hooseeya iyo adeegyada isku-dhafka Volume-dhexe oo leh habeyn habaysan. Waxaan ku qalabeysan nahay tas-hiilaadyo wax soo saar oo casri ah oo loogu talagalay mugga hoose-dhexe ee shirkii PCB-ga. Waxaanan leenahay khadad isku dhafan oo kala duwan oo si fudud u hagaajin kara oo wax uga beddeli kara shuruudaha alaabada elektaroonigga ah iyo qeexitaannada waqti gaaban.
Waxaan ka taxadaraynaa dhammaan golaha PCB-ga wax soo saarka PCB, soo iibinta qaybaha, isku imaatinka SMT, iyada oo loo marayo isku duubnaanta godadka, baaritaanka iyo gaarsiinta. Ahaanshaha hormuudka soo saaraha shirakada elektarooniga ah ee bixiya mugga adeegyada isku imaatinka PCB, waxaan xaqiijinaynaa in badeecadaadu ay gebi ahaanba halis ugu jirto lacag la'aan qiime jaban
PCBFuture’s Awoodda ku jirta Volume PCB Assembly
Waxaan nahay khabiir ku takhasusay guddiga wareegga wareegga ee warshadaha oo bixiya adeeg isku-kalsoon oo daabacan oo daabacan. Khubaradayada khibrada iyo masuuliyada leh waxay PCBFuture ka caawisaa inay u fidiso macaamiisheenna kal-fadhiyada ugu habboon sida laga filayo barnaamijyadooda gaarka ah.
• Naqshad Tijaabinta (DFT)
• Naqshad sameynta (DFM)
• Golaha BGA
• SMT isku dubaridka meelaynta qaybaha laga bilaabo 0402 illaa heerka qaangaarka QFP
• Shirka u hoggaansamida RoHS
• Iyada oo loo marayo alxanka shirkii PCB godka
• Gacanta adeegga alaabada PCB
• Shirarka PCB-ka ee aan leedhka lahayn
• Samaynta qaybaha leedhka ee saxnaanta
• Ha-nadiifin nidaamka dhaqidda biyaha
Faa'iidooyinka noo Golaha PCB mugga:
• Dhammaan guddiyada wareegsan ee daabacan ee qaawan waa 100% imtixaan (E-test, Solderability test, FQC iyo iwm).
• Khadadka isku imaatinka badan si loo buuxiyo baahida ugu badan ee shuruudaha macaamiisha.
• Bixiyaan adeeg isku soo uruurinta PCB si loo tijaabiyo ka hor inta aan la soo saarin tirada.
• Bilow wax soo saarka mass ka dib markii macaamiisha mari imtixaanada oo dhan ama ay bixiyaan markii labaad wax soo saarka shirkii PCB nooc.
Ku qabashada kormeerka AOI iyo kormeerka muuqaalka ee dhammaan howlaha isku imaatinka PCB.
• Isticmaalka baaritaanka raajada ee BGA iyo xirmooyinka kale ee adag.
• haddii wax arrimo golaha ka mid ah la helo, injineeradeenna khibradda leh ayaa xallin kara ka hor inta aan la rarin.
• Waxaan leenahay koox khibrad sare leh si aan u xallino dhammaan arrimaha golaha isla markaana aan kuugu dirno adiga PCB-yada tayada leh waqtiga loogu talagalay.
Waxaan kalsooni ku qabnaa inaan ku siino isku-darka ugu wanaagsan ee isku-darka adeegga isku-dhafka PCB, tayada, qiimaha iyo waqtiga gaarsiinta ee nidaamka isku-darka mugga Yaryar ee PCB-gaaga iyo Amarka isku-dhafka Midabka Volume PCB.
Haddii aad raadineyso soo saare shirkad ku habboon PCB, fadlan u soo dir faylashaada BOM iyo faylasha PCB sales@pcbfuture.com . Faylashaada oo dhami waa kuwo sir badan. Waxaan kuu soo diri doonnaa sicir sax ah oo leh waqtiga hogaanka 48 saacadood.
Shirkadda soo saarta daabacaadda iyo soo-saaraha golaha.
--- Noqo lammaane lagu kalsoonaan karo ---
Cinwaankaaga: RM4,16 / F HO KING COMM CTR 2-16 FAYUEN ST MONGKOK KLN HONGKONG